SORI-DALÁNA ANKAPOBENY HO AN’NY FIKAMBANAN’ NY PRETRAN’NY PRADO – Séminaire du Prado
SORI-DALÁNA ANKAPOBENY HO AN’NY FIKAMBANAN’ NY PRETRAN’NY PRADO
SORI-DALÁNA ANKAPOBENY HO AN’NY FIKAMBANAN’ NY PRETRAN’NY PRADO 1
SORI-DALÁNA ANKAPOBENY HO AN’NY FIKAMBANAN’ NY PRETRAN’NY PRADO 3
PRO MANUSCRIPTO.. 4
I. Ny fandaminana isaky ny Diosezy sy ny Vondrom-paritra. 5
A. Fandaminana ny Prado dioseziana. 5
B. Fandaminana isaky ny Vondrom-paritra. 6
D. Ny Sori-dalàn’ny Vondrom-paritra. 7
II. Fandraisan’ny rehetra anjara amin’ny fiainana sy ny asa fanirahana ataon’ny Prado iray manontolo. 8
III. Ny maha-mpiandraikitra ny tsirairay amin’ny famaliana ny antson’Andriamanitra 10
IV – Ny fiofanana pradoziana. 14
A. Ny fiofanana voalohany. 14
1. Fepetra amin’ny fandraisana fiofanana voalohany. 14
2. Fangatahana hiditra amin’ny fiofanana voalohany. 15
3. Ny votoatin’ny fiofanana voalohany. 15
4. Ny fepetra fanatontosana. 16
5. Ny fanendrena izay ho mpiandraikitra ny fiofanana voalohany. 16
B. Ny fiofanana mitohy. 17
D – Ny taona pradoziana. 17
V. Ny fanomezan-toky. 18
A. Ny firafitry ny fanomezan-toky. 18
B. Fanamarihana momba ny fangatahana hanao fanomezan-toky. 19
1. Fangatahana hanao fanomezan-toky voafetra. 19
2 – Fangatahana hanao fanomezan-toky mandrakizay. 20
D. Fanavaozana isan-taona ny fanomezan-toky. 21
VI – Ny fizotry ny Fivoriam-be. 21
VII – Ireo Lahika manokan-tena. 23
VIII – Ny seminarista sy ny seminera. 25
A – Ny seminarista miomana ho Prado. 25
B – Ny semineran’ny Prado. 26
Ny seminera sy ny fiofanana voalohany. 27
IX – Ny firotsahana tanteraka. 29
X – Fitantanam-bola sy fananana. 30
XI – Ny Firaketana. 31
XII – Ny Mpisolo toerana sy ny Mpitan-tsoratra ary ny Mpitam-bola jeneraly. 32
IMPRIME A FIANARANTSOA MADAGASCAR
Ankoatry ny Lalàm-panorenana (laharana faha-121), ny Sori-dalàna ankapobeny dia milazalaza ny Lalàna sasany tsara ho fantatra.
Manan-kery amin’ny mpikambana rehetra izy ity.
Ny roa am-pahatelon’ny mpivory amin’ny Fivoriam-be no mandany ny Sori-dalàna.
Azon’ny Fivoriam-be atao anefa ny manova azy araka io fombafomba io ihany (Lalàm-p. n° 121).
I. Ny fandaminana isaky ny Diosezy sy ny Vondrom-paritra
A. Fandaminana ny Prado dioseziana
Na dia anisan’ny Pretra dioseziana aza isika, dia miaina ny fahasoavan’ny Prado amin’ny diosezy misy antsika. Raha misy maromaro isika Prado amin’ny diosezy iray, dia aoka hamorona Prado dioseziana (Lalàm-p. n° 94).
Ho an’ny Eglizy Tatsinanana izay misy Pradoziana manana fomba fanompoam-pivavahana hafa, dia aoka tsy hisalasala ny hanorina ankohonana iraisana amin’ny fanompoam-pivavahana amin’izy samy izy.
Ny Vondrom-paritra tsirairay dia hilaza mazava amin’ny sori-dalàny ny fomba fifandaminan’ny Prado dioseziana sy ny fomba fanendrena izay ho mpiandraikitra (Lalàm-p. n° 96).
Ny mpiandraikitra ny Prado dioseziana dia manana adidy hanentana ny fiombonan’aina ao amin’ny Prado misy azy, amin’ny alàlan’ny famporisihana sy fandrindràna fihaonana. Tsy maintsy manohana ny tsirairay koa izy amin’ny fiantsoana hitory ny Evanjely amin’ny mahantra sy hiahy ny fifandraisana amin’ny Eveka sy ny mpiara-miasa.
Ao amin’ny Prado dioseziana dia mety hisy ekipa maromaro arakaraky ny habetsahan’ny mpikambana. Hojerena manokana amin’izany ny hisian’ny mpiandraikitra hisahana ny fanentanana isaky ny ekipa fototra tsirairay.
B. Fandaminana isaky ny Vondrom-paritra
« Ny Fivondronan’ny Pretra Pradozianina dia mitsinjara ho ankohonana isam-paritra. Ny Prado amin’ny Vondrom-paritra dia fivondronan’ny mpikambana avy amina diosezy maromaro, araka ny voafaritra ao amin’ny sori-dalàna ankapobeny » (Lalàm-p. n° 97).
« Ny filan-kevitra ambony no manapa-kevitra amin’ny fanorenana Vondrom-paritry ny Prado, ny fanafoanana azy, ny fampiraisana azy na famaritana hafa, araka izay voafaritra ao amin’ny sori-dalàna ankapobeny » (Lalàm-p. n° 98).
Ireto avy ny fepetra takiana :
a) Ny Filan-kevitra ambony dia tsy afa-milaza hoe vondrom-paritra ny fitambaran’ny pradoziana iray firenena na avy amin’ny firenena samy hafa raha tsy mahaleo tena, tsy amin’ny fanentanana fotsiny, fa amin’ny fanofanana fototra sy mitohy ho an’ny mpikambana ao aminy izy.
b) Izany dia midika fa ny vondrom-paritra dia tokony hanana mpiandraikitra sy mpanolo-tsaina manana traik’efa, eo amin’ny vondrom-paritra, handamina ny fiofanana sy handray, amin’ny alàlan’ny Fiangonana sy ny Fikambanana, ny fanomezan-toky voalohany sy fanomezan-toky mandrakizay.
d) Mba ho lasa Vondrom-paritra ny Prado, dia tokony hisy mpikambana tera-tany eo amin’ny telopolo eo ho eo izay mirotsaka tanteraka ao mandrapahafaty.
e) Raha mety dia azo atao ny manangana vondrom-paritra iraisan’ny mpikambana avy amina firenena maromaro.
Ankoatr’izany, mba ho afaka hanangana Vondrom-paritra, ny Tompon’andraikitra ambony dia hangataka mialoha amin’ny mpikambana amin’io Prado io mba hanolotra eo anatrehan’ny Filan-kevitra ambony ny volavolan-tsori-dalàna.
Ny mpiandraikitra ny Prado amin’ny Vondrom-paritra dia olona afaka tanteraka na ampahany amin’ny asa pastôraly hafa arakaraky ny famelàn’ny Evekany azy.
D. Ny Sori-dalàn’ny Vondrom-paritra
Samy manana ny sori-dalàna ho azy ny Vondrom-paritra tsirairay. Io sori-dalàna io dia tsy maintsy lanin’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao sy hatolotra mba hankatoavin’ny Filan-kevitra ambony.
Farafahakeliny, tsy maintsy ahitàna ireto fepetra manaraka ireto ny sori-dalàna :
a) Fandrafetana ny fivoriam-be, ka hosoritana amin’izany izay manan-jo manokana amin’ny fifidianana ; ny fe-potoana sy ny faharetan’ny fitondran’ny mpiandraikitra sy ny mpanolo-tsaina azy (Lalàm-p. n° 99 – 100).
b) Fandaminana ny Prado dioseziana sy ny fomba fanendrena izay ho mpiandraikitra ao (Lalàm-p. n° 96).
d) Fametrahana sori-dalàna momba ny fanofanana sy fiomanana amin’ny fanomezan-toky, araka izay voatondro ao amin’ny Lalàm-panorenana sy ny Sori-dalàna ankapobeny.
e) Fitantanam-bola sy fananana (jereo Sori-dalàna ankapobeny toko X) ; fitànana ny firaketana (jereo toko XI).
Raha misy « olona maniry hivondrona ka te-hiaina ny toe-panahin’ny Prado ary handray anjara amin’ny asa fanirahana eo anivon’ny mahantra » (Lalàm-p. n° 115) ao amin’ny Vondrom-paritra, dia hosoritana tsara ao amin’io vondrom-paritra io ny fombafomba hahafahan’izy ireo mandray anjara amin’ny fiainan’ny Prado, araka ny Lalàm-panorenana laharana faha-116.
II. Fandraisan’ny rehetra anjara amin’ny fiainana sy ny asa fanirahana ataon’ny Prado iray manontolo
Ny olona rehetra ao amin’ny Fikambanana dia tsy maintsy mahatsapa ho tompon’andraikitra amin’ny fiainana sy ny asa fanirahana ataon’ny « Fivondronan’ny Pretra Pradozianina » iray manontolo.
Tsy hiroa fo isika amin’ny fandraisana anjara mavitrika amin’ny fihaonan’ny Prado dioseziana sy ny fanomanana ny Fivoriam-be sy ny an’ny Vondrom-paritra misy antsika.
Ny mpikambana tsirairay dia afaka maneho ny heviny sy ny fomba fijeriny eo anatrehan’ny Mpiandraikitra ny Vondrom-paritra misy azy na koa amin’ny Tompon’andraikitra ambony, amin’ny alàlan’ny mpiandraikitra dioseziana na mivantana, raha ohatra ka tena ilaina na mahasoa azy izany.
Hoekentsika an-tsitra-po, rehefa neken’ny Evekantsika, ny hitàna izay andraikitra angatahina amintsika ho an’ny Prado, na tamin’ny alàlan’ny latsa-bato izany na tamin’ny tolo-kevitry ny mpiandraikitra.
Ny Pretran’ny Prado, araka ny fanirian’i Mompera Chevrier dia « pretra manam-piniavana, vonona lalandava handeha amin’ny toerana rehetra mba hitory ny Evanjely amin’ny mahantra ».
Araka ny voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenana laharana faha – 27, dia tsy hisalasala isika raha ilaina, ao anatin’ny fiombonan’antoka amin’ny Fiangonana, hanolo-tena « ho mpiasa an-tsitra-po amin’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra amin’ny diosezy na firenena izay hita fa tena mila famonjena manokana ».
Hanaiky an-tsitra-po koa isika ny hanompo ivelan’ny diosezintsika, rehefa neken’ny Evekantsika, mba ho afaka hanofana apôstôly ho an’ny mahantra ao amin’io Fiangonana io na ho afaka hanorina sy hampiroborobo ny Prado amin’ireo Fiangonana ireo.
III. Ny maha-mpiandraikitra ny tsirairay amin’ny famaliana ny antson’Andriamanitra
« Raha vao miditra amin’ny Prado isika dia tapa-kevitra ny hanampy ireo rahalahintsika ho tonga mpianatra sy Apôstôlin’i Jesoa » (Lalàm-p. n° 67). « Hiezaka ho tonga olomasina » sy apôstôly manolo-tena manontolo hitory ny Evanjely amin’ny mahantra izay miseho amin’ny ohatra velona. Mba tsy hivadihantsika amin’izany dia hifanampy isika samy isika ary hampian’ny mpiandraikitra antsika koa (jereo Lalàm-p. n° 118). Andrasantsika avy amin’izy ireo ny famporisihana antsika, ny fanontaniany antsika sy ny fanoroany làlana antsika amin’izay mety hampifanaraka ny fotoana sy ny toerana amin’ny antso maha-mpianatra sy irak’i Jesoa antsika eo amin’ny mahantra.
Ireto andininy manaraka ireto dia manome torolalàna ankapobe izay hazavaena ao anatiny Sori-dalàna manokana.
Hifanampy isika mba tsy hivadika amin’izay takian’ny Fiangonana amin’ny Pretra rehetra : Eokaristia isan’andro, araka izay azo atao ; fanatontosàna isan’andro ny Vavaky ny Fiangonana ; fahazarana amin’ny vavaka samirery ; fandraisana matetika ny sakramentan’ny Fampihavanana ; fanajana an’i Masina Maria ; laretirety isan-taona (Lalànan’ny Fiang. 276 sy 719).
Mba hampisongadina ny antso maha-Prado araka ny voasoritra ao amin’ny Lalàm-panorenana toko V, dia hilofo tokoa isika amin’ny fianarana ny Evanjely tsy tapaka araka ny hevitr’i Mompera Chevrier ary hampahatsiahy an’izany amin’ny ekipa fototra misy antsika (Lalàm-p. n°37). Ny mpiandraikitra dia hanome tolo-kevitra fampiharana sy hanoro ny fomba hatao. Izy ireo koa no handamina ny fotoam-piofanana na fotoana manokana mihitsy hianarana ny Evanjely.
Ao amin’ny ekipantsika, hiezahana ny hihaino ny Fanahy Masina amin’ny fampiharana ny jery todika ny fiainana manokana sy ny fiainan’ny ankohonana (Lalàm-p. n° 38). Ity fomba fanaovana jery todika ny fiainana ity dia hanome lanja ny toe-tsaina sy ny fihetseham-pon’ireo firenena samihafa.
Ny mpiandraikitra, mandritra ny fihaonana amin’ny mpikambana, dia hiara-manao jery todika ireo zava-dehibe niseho tamin’ny fiainan’izy ireo, mba hahafahana manampy azy ireo hizotra araka ny Fanahin’Andriamanitra.
Hifanampy manokana isika amin’ny fanaovana jery todika ny fiainana amin’ny fotoana angatahana antsika handray fandraharahana vaovao sy amin’ny fotoana andraisantsika fanapahan-kevitra lehibe.
Hanontany tena matetika isika, ampian’ny mpiandraikitra, amin’ny fisiantsika eo anivon’ny mahantra, satria noho ny fiantsoan’Andriamanitra, dia voaantso hifidy manokana ny hiara-dia amin’ny mahantra isika (Lalàm-p. n° 44).
Tsy hanentsin-tadiny isika amin’ireo antony fototra mahatonga ny fahantrana sy ny toetra iombonana hita amin’ny fiainan’ny mahantra ary ny adin’izy ireo mba ho afa-patorana, ka hahafahantsika mitory tsaratsara kokoa amin’izy ireo ny Evanjely.
Hotadiavintsika koa, miaraka amin’ny ekipa, ny hanavaozana ny fomba izay azo itokisana sady tonga lafatra hantanterahana ny fanambaràna an’i Jesoa Kristy amin’ireo madinika eto an-tany, ka hifanaraka amin’ny fomban’izy ireo, ny kolon-tsainy, ny halehibe na ny tsy fisian’ny fianoany (Lalàm-p. n° 45).
Miaraka amin’ny ekipa, hifanampy isika mba hiaina ny fahantrana marina « noho ny fitiavana ny Tompontsika sy noho ny fitiavana an’ireo fadiranovana eto an-tany izay anirahana antsika » (Lalàm-p. n° 49).
Hotantànantsika an-karihary miaraka amin’ny Lahika ny volan’ny Fiangonana ankinina tamintsika mba hahafahana manao tatitra mazava.
Koa satria voaantso hionona « amin’ny tena ilaina amin’ny trano, fitafiana, sakafo sy fananana hafa » isika, dia ny mpiandraikitra no hanome ny toromarika amin’ny fampiharana izany, mba ho afaka hifanampy ny mpikambana rehetra, miaraka amin’ny ekipa sy ny mpiandraikitra, amin’ny fandinihana izay tena hampiasàna sy hitantanana ny fananan’izy ireo sy ny fomba fiainany (jereo Lalàm-p. n° 51).
Hotsinjovintsika manokana izay ilain’ny tsirairay amin’ny fizaràna ny fananana isaky ny Prado.
Ny fivoriam-ben’ny Vondrom-paritra sy ny Mpiandraikitra ao ary ny Mpanolo-tsaina dia manam-pahefana hamaritra ny fomba fandrotsahan’ny mpikambana amin’ny vondrom-paritra ny anjara latsa-kemboka ho an’ny « Fivondronan’ny Pretra Pradozianina » (jereo Lalàm-p. n° 54). Io vola io no hitsinjovana ny fampandehanan-draharaha ao amin’ny Vondrom-paritra sy ny fandaniana amin’ny Prado foibe.
Hifanampy isika, amin’ny fandraharahana ataontsika, mba hiaina ny fanekena ho toy ny fitadiavana am-pahavitrihana sy amin-kery ny « sitra-pon’ilay te-hamonjy ny olombelona rehetra » (jereo Lalàm-p. n° 57 – 61). Noho izany, ao amin’ny ekipantsika, dia hifarimbona isika hitady « izay mahafaly ny Tompo » amin’ny alàlan’ny zava-mitranga « amin’ny fiainana andavanandro », ho fankatoavana ihany koa ny torolàlana sy ny fanapahan-kevitry ny mpiandraikitra ny Fiangonana (jereo Lalàm-p. n° 59 sy 60). Amin’ity safidy ity dia omen-danja ny hery manintona ny tena, ny fomba fijery ny zava-misy, ny hetahetan’ny mahantra indrindra mba hahafahana manompo azy ireo tsara kokoa araka ny fomban’i Jesoa, ny fifantohana amin’ny Soratra Masina sy fakan-tahaka amin’ny Fiangonana.
Hotsiahivin’ny mpiandraikitra fa manana adidy manokana izy ireo amin’ny fanampiana antsika hanatanteraka ny sitra-pon’Andriamanitra, amin’izay anirahan’ny Eveka antsika.
Izy ireo no hanampy antsika amin’ny fitadiavana fifanakalozan-kevitra amin’ny Fiangonana eo an-toerana miaraka amin’ny Evekantsika sy ny mpiara-miasa aminy. Raha sendra ny sarotra sy ny fifandirana, dia tokony horaisin’ny mpiandraikitra antsika am-pirahalahiana isika ary hahazo fanampiana mazava mba hahatsapa izay takian’ny Tompo amintsika.
Ny tsy fivadihantsika amin’ny fanomezan-toky ho tokan-tena dia ahatsapantsika fa samy tompon’andraikitra amin’ny isam-batan’olona isika. Raha ilaina dia tokony hifanao jery todika mahasoa isika (jereo Lalàm-p. n° 62 – 64).
Ny mpiandraikitra dia hijery manokana ny fomba fiainan’ny mpikambana eo am-panatanterahan’izy ireo ny fandraharahana : fomba fitafy, fandanjalanjam-piainana, fitokanan-tena, sns…
Haneho toe-panahim-pianakaviana amin’ny zavatra rehetra isika, indrindra rehefa misy aretina, harerahana na fahasahiranana hafa.
Ny mpiandraikitra dia hanao izay hivondronan’ny ekipa, mba tsy hisy na dia mpikambana iray aza hitoka-monina.
Hanao andrimaso ny fitsipi-piainan’ny ekipa izy ireo mba hampandroso azy tsara. Izy ireo no hanome ny fepetra, ny torolàlana sy ny fomba fampiharana mba ho afaka hanao asa mitohy izay mifanaraka amin’ny fiantsoan’Andriamanitra sy ny iraky ny Prado ny ekipa.
Izy ireo no hiahy ny fandraisan’ny rehetra anjara mavitrika amin’ny fiainana iombonan’ny Prado dioseziana sy ny Vondrom-paritra (fiaraha-miaina, laretirety isan-telovolana, fiofanana) (jereo Lalàm-p. n° 69).
Izy ireo no hamporisika mba hisian’ny ekipa iray aina, raha toa ka mety eo an-toerana izany (Lalàm-p. n° 71).
IV – Ny fiofanana pradoziana
A. Ny fiofanana voalohany
1. Fepetra amin’ny fandraisana fiofanana voalohany
Ny mpiomana miditra amin’ny fiofanana voalohany dia ampahalalaina mazava ny tanjona ho tratrarina araka izay voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenana laharana faha – 79, ary hanaiky an’izany.
Mba ho azo raisina dia tsy maintsy hita taratra amin’ilay mpiofana ny hery mahasarika hanara-dia an’i Jesoa Kristy akaiky kokoa, ny faniriana te-hiaina miaraka amin’ny mahantra ka ho mpandraharahan’ny Evanjely sy hikatsaka fiainam-pirahalahiana sy hizotra araka ny fomban’i Jesoa Kristy.
2. Fangatahana hiditra amin’ny fiofanana voalohany
Ny Tompon’andraikitra ambony irery, araka ny tolo-kevitry ny Mpanolo-tsaina azy, no afaka mandray olona hanao fiofanana voalohany (jereo Lalàm-p. n° 88).
Raha misy mangataka hanao fiofanana voalohany monina amin’ny firenena izay mbola tsy misy Vondrom-paritra, dia avantana amin’ny Tompon’andraikitra ambony, amin’ny alàlan’ny mpiandraikitra ny Prado eo an-toerana, ny fangatahana (Lalàm-p. n° 88 sy 133).
Raha seminarista ao amin’ny semineran’ny Prado kosa no manao fangatahana, dia hotànana izay voarakitra ao amin’ny sori-dalàna ankapobeny momba ny semineran’ny Prado.
Ny fangatahana sy ny valiny dia tsy maintsy tehirizina ao amin’ny Firaketan’ny Filan-kevitra.
3. Ny votoatin’ny fiofanana voalohany
Izy ity dia atao araka ny Lalàm-panorenana. Hotsinjovina ny hisian’ny anjara toerana lehibe ho an’ny fianarana ny Evanjely sy ny jery todika ny fiainana. Hampiasaina ireo raki-tsoratr’i Mompera Chevrier, indrindra ny « Véritable Disciple ».
Hojerena koa ny hisian’ny fotoana malalaka ho an’ny vavaka (ohatra : laretirety, fiofanana, volana).
4. Ny fepetra fanatontosana
Mandritra ny fiofanana voalohany dia tànana ihany ny asa mahazatra, kanefa hotsinjovina koa ny fotoana malalaka hanaovana ity fiofanana ity.
Raha misy maromaro ny olona indray manao fiofanana voalohany dia halamina araka izay azo atao ny fiaraha-miasa.
Tsara raha jerena mialoha ny hananan’ireo manao fiofanana voalohany fotoana miavaka handalinany ny hevi-dehibe amin’ny antso maha-Prado sy hifankalalàna bebe kokoa eo amin’ny fianakavian’ny Prado. Ity fotoana miavaka ity dia azo atao isaky ny firenena, na isaky ny Vondrom-paritra, na iraisam-pirenena mihitsy aza.
5. Ny fanendrena izay ho mpiandraikitra ny fiofanana voalohany
Tsy maintsy arahina ireto fepetra ireto :
a) Ny mpikambana voafidy dia tsy maintsy manana traik’efa azo antoka ao amin’ny Prado ary mifandray tsara amin’ireo Pretra rahalahiny ao amin’ny diosezy.
b) Tsy maintsy afaka handray ny antso maha-Prado ao anatin’ny fanajana ny fivoaran’ny mpiomana sy handanjalanja ny fiantsoana azy ireo izy.
B. Ny fiofanana mitohy
Hanao drafitra maty paika momba ny laretirety, fiofanana na iray volan’ny fiofanana ny mpiandraikitra ny Prado mba hanampiana ny mpikambana manontolo hifikitra amin’ny fiantsoana azy ireo (jereo Lalàm-p. n° 80 sy Sori-dalàna toko III). Hojeren’izy ireo manokana ireo miomana amin’ny fanomezan-toky mandrakizay.
Ny revion’ny Prado no fitaovana ampiasaina amin’ny fiofanana mitohy.
Horaisina koa izay voalamin’ny diosezy momba ny fiofanana mitohy ho an’ny pretra.
D – Ny taona pradoziana
Mba tsy ho tara loatra dia ny mpiandraikitra ambony no hiahy ny fahafahan’ireo mpikambana tsirairay eo ambany fiadidiany hanao ny taona pradoziana.
Izy ireo no hanao ny fifampiraharahana amin’ny mpiandraikitra dioseziana sy ny Eveka ny amin’ny fomba tsara sy mety hampalalaka ireo tsy maintsy hiatrika ity taom-piofanana ity.
Hatao izay azo atao mba hahafahan’ny mpikambana miara-miaina mandritra io taona io.
Ny Tompon’andraikitra ambony sy ny mpanolo-tsaina azy no hanao izay hahatanterahan’ny taona pradoziana araka ny fepetra voalazan’ny Lalàm-panorenana sy ny Sori-dalàna ankapobeny.
Ny Filan-kevitra ambony dia hiezaka hanome fahafaham-po ireo firenena maniry ny hanao taona pradoziana iraisam-pirenena.
V. Ny fanomezan-toky
A. Ny firafitry ny fanomezan-toky
Ny fanomezan-toky dia tanterahina araka izay voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenana laharana faha – 82 sy 83.
Ity fanomezan-toky ity dia hanome lanja ny fahasamihafàn’ny zava-misy, ny vahoaka ary ny Fiangonana misy antsika. Izany no mahatsara ny hanànan’ny tsirairay fahafahana eo am-panaovana ny fanomezan-toky.
Mandritra ny fotoam-pivavahana, izay anasàna, raha ohatra ka mety, ireo fianakaviana amin’ny Prado sy ny vahoaka amin’ny Fiangonana eo an-toerana, no hamakian’izay manao fanomezan-toky am-pahibemaso ny rijan-teny izay nomanina niaraka tamin’ny mpiandraikitra, ary hofaranany amin’ny teny voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenana laharana faha – 86.
Ny mpiandraikitra ambony na ny solon-tenany no mandray ny fanomezan-toky.
B. Fanamarihana momba ny fangatahana hanao fanomezan-toky
1. Fangatahana hanao fanomezan-toky voafetra
Amin’ny famaranana ny taona faharoa amin’ny « fiofanana voalohany » dia asaina manao fangatahana fanomezan-toky voafetra ny mpiomana (Lalàm-p. n° 79).
Maharitra dimy taona ny fanomezan-toky voafetra.
Alefa amin’ny Tompon’andraikitra ambony sy mahefa ny fangatahana, na raha misy antony manokana, dia amin’ny mpiandraikitra ny Prado eo an-toerana. Ny Mpanolo-tsaina no hanapa-kevitra amin’ny alàlan’ny latsa-bato (Lalàm-p. n ° 132 sy 137) rehefa avy naka ny hevitry ny mpiandraikitra ny fiofanana voalohany.
Ny fangatahana sy ny valiny dia tsy maintsy voarakitra an-tsoratra.
Alohan’ny fangatahana hanao fanomezan-toky voafetra, ny Pretra mpiomana dia hangataka ny fankatoavan’ny Evekany (Lalàm-p. n° 87).
Ny seminarista izay voaray amin’ny fiofanana voalohany, raha tsy hoe hiditra tanteraka ao amin’ny Fikambanan’ny Pretran’ny Prado izy, dia tsy mahazo mangataka hanao fanomezan-toky voafetra raha tsy amin’ny fotoana hanamasinana azy ho diakra.
Ho an’ny seminarista ao amin’ny semineran’ny Prado, dia hotànana izay voalaza ao amin’ny Sori-dalàna momba ny seminera (jereo toko VIII).
Rehefa tapitra ny roa taona amin’ny fiofanana voalohany, kanefa misy te-hanalava ny fotoam-pandinihan-tena sy ny fiofanana, dia afaka mangataka fanemorana tsy mihoatra ny roa taona izy.
2 – Fangatahana hanao fanomezan-toky mandrakizay
Amin’ny faha-dimy taonan’ny fiainana voafetra ao amin’ny Fikambanana no tokony hangataka hanao fanomezan-toky mandrakizay. Azo halavaina iray taona na roa taona farafahatarany ny fanomezan-toky voafetra. Azo atao koa ny miala.
Raha ao amin’ny Vondrom-paritra no ipetrahana dia alefa amin’ny mpiandraikitra io Prado io ny fangatahana hanao fanomezan-toky mandrakizay, rehefa avy nifampidinika tamin’ny mpiandraikitra dioseziana. Raha tsy izany kosa dia amin’ny Tompon’andraikitra ambony no andefasana azy rehefa avy nifampidinika tamin’ny mpiandraikitra ny Prado eo an-toerana. Ny Mpanolo-tsaina mahefa no hanapa-kevitra rehefa avy nanao latsa-bato (Lalàm-p. n° 132 sy 137). Ny fangatahana sy ny valiny dia tsy maintsy voarakitra an-tsoratra.
Raha misy te-hanalava ny fotoanan’ny fanomezan-toky voafetra dia hanao fangatahana an-tsoratra amin’ny mpiandraikitra ambony izay iankinany izy ka hilaza mazava ny anton’ny fanemorana.
Hanontany ny mpikambana ny mpiandraikitra, ao anatin’ny faha-dimy taonan’ny fiainana voafetra, raha manam-paniriana hanao fanomezan-toky mandrakizay izy ireo. Ny mpiandraikitra ny Vondrom-paritra misy ny mpikambana na ny tompon’andraikitra ambony no hametraka io fanontaniana io.
D. Fanavaozana isan-taona ny fanomezan-toky
Mety hisy vanim-potoana malalaka azo hararaotina hanentanana ny mpikambana hanavao ny fanomezan-tokin’izy ireo. Ohatra amin’ny vanin-taonan’ny fiofanana na fanamafisana, sy isan-taona, raha azo atao, ny 10 Desambra, andro ahatsiarovana ny nanorenan’i Mompera Chevrier ny Prado.
Amin’ny vanim-potoana manan-danja eo amin’ny fiainana maha-Prado antsika (fiofanana, sy fanomezan-toky) no hiainantsika bebe kokoa ny fifikirantsika amin’ny Fiangonana eo amin’ny diosezy amin’ny alàlan’ny fiaraha-midinika amin’ny Evekantsika sy ny rahalahy Pretra ary ny mpikambana amin’ny ankohonana kristianina izay anaovantsika ny asa mahazatra.
VI – Ny fizotry ny Fivoriam-be
Ny Tompon’andraikitra ambony sy ny Mpanolo-tsaina azy no mamaritra mazava ny fomba fanendrena izay ho solon-tena amin’ny Fivoriam-be sy manomana ny fandaharam-potoana izay hankatoavin’izy ireo ihany.
Hisy koa ny vinavinam-pitsipika momba ny Fivoriam-be izay holaniana amin’ny alàlan’ny latsa-bato.
Azo atao ny mifidy ekipa mpandrindra mba hampizotra tsara ny Fivoriam-be.
Mifidy olona roa hatao mpandrindra ny fifidianana koa ny Fivoriam-be. Mandritra ny fifidianana izay ho Tompon’andraikitra ambony sy ny mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra, dia ny mpandrindra no hanangona ny vokatry ny latsa-bato, eo anatrehan’ny filohan’ny fifidianana, ka hanamarina raha mifanandrify amin’ny isan’ny mpifidy ny vato nalatsaka; izy ireo no hanao ny fanisam-bato sy hamoaka am-pahibemaso ny vokatra azon’ny mpilatsaka tsirairay (Lalànan’ny Fiang. n° 173 § 2).
Ny Sekretera jeneraly, na raha misy tsy fahafahany dia mpikambana iray voafidin’ny Fivoriam-be, no hanao ny firaketana an-tsoratra ny vokatry ny fifidianana sy ny fanapahan-kevitry ny Fivoriam-be.
Ny mpitarika ny Fivoriam-be no hanambara ny fifaranan’ny adihevitra ka hampandroso ny mpivory amin’ny latsa-bato.
Raha mangataka ny hanaovana latsa-bato miafina ny folo isan-jaton’ny mpivory dia hotanterahina araka ny fanirian’izy ireo izany.
VII – Ireo Lahika manokan-tena
« Ao anatin’ny Vondrom-paritra, ireo lahika manokan-tena dia manan-jo hanana rafitra manokana araka ny sori-dalàna nankatoavin’ny Filan-kevitra ambony. Ny Fikambanan’ny Frera dia mivondrona ho Firahalahiana iray » (Lalàm-p. n° 106).
Azo ampidirina amin’ny sori-dalàn’ny Firahalahiana ny fananany filoha mpiandraikitra iray, otronin’ny mpanolo-tsaina. Ny mpiandraikitra sy ny mpikambana ao amin’ny filan-kevitra, izay notsongaina teo anivon-dry Frera, dia azo fidiana mandritra ny Fivoriam-ben’ny Firahalahiana araka ny voasoritra ao amin’ny Sori-dalàn’ny Firahalahiana.
Ny mpiandraikitra sy ny mpanolo-tsaina dia manana adidy amin’ny tsy fivadihan’ny Rahalahy amin’ny fiantsoana pradoziana sy ny fahamendrehan’ny firaiketam-pon’izy ireo amin’ny Fiangonana misy azy ireo.
Azo atao koa ny mizarazara ho ekipana fiainana iombonan’ny mpirahalahy izay samy hanana ny mpiandraikitra azy avy. Ny mpiandraikitra ny Firahalahiana sy ny mpanolo-tsaina azy no handamina sy hanara-maso ireo ekipa ireo.
Raha misy fikambanan’ny Firahalahiana ao anatin’ny Vondrom-paritry ny Prado dia hanendry Pretra iray ny mpiandraikitra io Vondrom-paritra mba hiara-misalahy amin’ny mpiandraikitra sy ny mpanolo-tsain’ny Firahalahiana.
Hojerena, araka izay mety, ny hampitovy ny tadin-dokanga amin’ny Filan-kevitr’io vondrom-paritra io sy ny mpiandraikitra ny Firahalahiana. Hoezahina koa ny hisian’ny solon-tena avy amin’ny Firahalahiana mandritra ny fivoriana isan-karazany.
Ny sori-dalàn’ny Firahalahiana no hamaritra mazava ny ventin-kevitra sy ny fombafomba ary ny fandraisana an-tànana ny fiofanana (jereo Lalàm-p. n° 107).
Araka ny Lalànan’ny Fiangonana (n° 720) sy ny Lalàm-panorenana (n° 107) dia ny tompon’andraikitra ambony no mampandroso amin’ny fiofanana sy ny fanomezan-toky. Ny mpiandraikitra ny Firahalahiana sy ny mpanolo-tsaina no hanolotra ny mpiomana amin’izy ireo.
Raha misy tanora iray na maromaro maniry hiaina ny Firahalahian’ny Prado amin’ny firenena tsy mbola misy ny Firahalahiana, raha misy Vondrom-paritry ny Prado ao, dia ny mpiandraikitra io Vondrom-paritra io, rehefa naka ny hevitry ny Tompon’andraikitra ambony, na raha tsy misy Vondrom-paritra, dia ny Tompon’andraikitra ambony mihitsy, rehefa nifampidinika tamin’ny mpikambana amin’io Prado io, no hanendry frera na pretran’ny Prado mba hanara-maso ny fiofanan’izay ho frera araka ny fomba mifanaraka amin’ny zava-misy.
Na dia eo aza ny fifanalaviran-toerana, ny fahasamihafàn’ny fiteny sy ny zava-misy, ny Freran’ny Prado samy hafa firenena dia hitady araka izay azo atao ny fomba hahafahan’izy ireo mifandray. Afaka mifampizara sy mifanakalo traik’efa maha-lahika manokan-tena azy izy ireo ho fanasoavana ny Fikambanana ; amin’izay dia ho tanteraka tokoa ny fiaraha-misalahy amin’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra.
Ny Filan-kevitra ambony dia hanao izay hisian’ny solon-tenan-dry Frera, araka izay maha-mety azy, amin’ny asa ataon’izy ireo. Hotsinjoviny koa ny mba hisian’ny solon-tenan’ny Frera amin’ny Fivoriam-be.
Amin’ny toerana mbola tsy ahafahan’ny Frera mamorona Firahalahiana dia hivondrona amin’ny Pretran’ny Prado izy ireo.
VIII – Ny seminarista sy ny seminera
A – Ny seminarista miomana ho Prado
Raha hita fa tena ilaina amin’ny fiainan’ny Fiangonana eo an-toerana, dia azon’ny Tompon’andraikitra ambony atao ny mandray seminarista hanao fiofanana voalohany ; kanefa, raha tsy misy antony hafa, dia andrasana ho voaray amin’ny fandraharahana maha-pretra aloha izy ireo vao hoekena, araka ny Lalànan’ny Fiangonana n° 1034 § 1.
Hotànana ny fepetra ankapobeny voalaza etsy aloha momba ny fanofanana ankapobeny (Sori-dalàna, toko IV).
Koa satria mandritra ny fotoam-piofanana no iomanan’ny seminarista amin’ny ho avin’ny fiainany, dia atao izay hampiray ny fiainany manontolo amin’ny fahalalàna an’i Jesoa Kristy : fianarana, fiainana maha-iraka sy fiainana ara-panahy.
Halamina mba hifanaraka amin’ny fiainan’ny seminera ny fanofanana voalohany. Hojerena akaiky koa ny fifandraisan’ny seminarista amin’ny seminarista hafa ao amin’ny diosezy.
Alohan’ny handraisana olona amin’ny fiofanana dia hangatahina ny fanomezan-dalàna avy amin’ny lehiben’ny seminerany ary tsy hotapahina ny fifandraisana aminy mandritra ny fotoam-piofanana.
Hotsinjovina koa ny hahitan’ny seminarista ny ankohonana dioseziana ao amin’ny Prado ka handraisany anjara araka izay azo atao amin’ny fiainam-pikambanana.
Anjaran’ny Tompon’andraikitra voalaza ny manapa-kevitra amin’ny fidiran’ny seminarista amin’ny fiofanana voalohany sy ny fanendrena izay hampiofana. Hotsongaina manokana izay olona afaka misafidy sy manofana momba ny fiantsoana pradoziana ao anatin’ny fiantsoan’Andriamanitra amin’ny fandraharahana maha-pretra.
B – Ny semineran’ny Prado
Ny semineran’ny Prado dia natao hanofanana pretra mahantra mba hitory ny Evanjely amin’ny mahantra. Raha vao miditra ao amin’ny semineran’ny Prado ny seminarista dia eken’izy ireo ny hiofana araka ny toe-tsain’ny Prado izay efa voasoritra ao amin’ny Lalàm-panorenana laharana faha – 74 sy 113.
Ny toe-tsain’ny Prado dia tsy maintsy hita taratra amin’ny fomba fanofanana izay ho pretra : ara-panahy, ara-pitondrana, ara-tsaina, samirery na iarahana amin’ny besinimaro.
Hotànana ireo didy aman-dalàna napetraky ny Fiangonana momba ny fanofanana pretra (jereo Lalànan’ny Fiang. n° 232 – 264), ny fanekena hiroso amin’ny filaharana (jereo Lalànan’ny Fiang. n° 1008 – 1054) ary ny mety ho fidirana amin’ny Fikambanana (jereo Lalànan’ny Fiang. n° 266).
Ny fitsipi-pifehezana, neken’nyTompon’andraikitra ambony sy ny Mpanolo-tsaina azy no handrafitra ny fomba fiasan’ny seminera.
Hojerena koa ny tsy hisian’ny seminarista miditra ao amin’ny seminera kanefa tsy nahazo alàlana tamin’ny Eveka na ny Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Prado.
Ny seminera sy ny fiofanana voalohany
Zavatra roa samy hafa ny fidirana amin’ny seminera sy ny fidirana amin’ny fiofanana voalohany (Lalàm-p. n° 79). Ny lehiben’ny seminera no manam-pahefana amin’ny fampidirana ao amin’ny seminera. Ny Tompon’andraikitra ambony arahin’ny tolo-kevitra avy amin’ny Mpanolo-tsainy kosa no manam-pahefana hampandroso amin’ny fiofanana pradoziana (Lalàm-p. n° 88).
Ny seminarista maniry ny hiditra amin’ny fikambanana dia asaina hanolotra ny fangatahany hidirana amin’ny fiofanana voalohany amin’ny fotoana voatondro ho amin’izany, indrindra amin’ny fotoana anekena azy ho anisan’ny mpandraharaha maha-pretra, na amin’ny fotoana maha-diakra.
Hampahafantarina ny seminarista fa ny fiofanana voalohany dia maharitra roa taona. Koa raha azo atao dia mandritra ny fiofanana ao amin’ny seminera no anaovana ny fangatahana hanao fiofanana voalohany ka handaminana ny fotoana hanatanterahana azy.
Ny fangatahana dia avantana amin’ny Mpiandraikitra ny Vondrom-paritra izay tian’ny seminarista hirotsahana ho mpikambana, na amin’ny Tompon’andraikitra ambony arakaraky ny zava-mitranga.
Ny Lehiben’ny seminera izay efa naka ny hevitry ny mpanolo-tsaina azy no mampita ny fangatahana.
Ny fiofanana voalohany ataon’ny seminarista dia eo ambany fitantanan’ny lehiben’ny seminera na pretra hafa notendreny ka hiara-miasa akaiky aminy.
Ny fangatahana hanao fanomezan-toky voafetra dia tsy azo atao raha tsy vita tanteraka ny fiofanana voalohany (jereo Lalànan’ny Fiang. n° 722 § 3).
Ankoatry ny seminarista hiditra tanteraka amin’ny Prado, dia tsy hatao ny fangatahana hanao fanomezan-toky voafetra raha tsy vita ny fanamasinana ho diakra.
Hangatahina mialoha koa ny faneken’ny Eveka (Lalàm-p. n° 83).
Halefa amin’ny mpiandraikitra ny vondrom-paritra na ny Tompon’andraikitra ambony arakaraky ny zava-mitranga ny fangatahana hanao fanomezan-toky voafetra rehefa avy nangataka ny hevitry ny lehiben’ny seminera sy ny mpikambana ao amin’ny filan-kevitra.
IX – Ny firotsahana tanteraka
Tsy azo atao ny miditra tanteraka ao amin’ny Prado raha tsy efa nahavita ny fanomezan-toky mandrakizay. Ho an’ny seminarista miomana hiditra tanteraka amin’ny Prado kosa (jereo Lalànan’ny Fiang. n° 266 sy Lalàm-p. n° 111) dia hangatahina ny fanomezan-dalàna avy amin’ny manam-pahefana mahefa raha ilaina.
Holazaina isaky ny misy Fivoriam-be ireo olona nirotsaka tanteraka hatramin’ny Fivoriam-be farany sy ireo filàna mitaky valiny.
Hisy sori-dalàna manokana ho an’ireo niditra tanteraka ao amin’ny Prado.
Io sori-dalàna io, izay neken’ny Filan-kevitra ambony, no hanondro mazava ny fepetra hidirana amin’ny fikambanana ary hanatanteraka ireto ventin-kevitra ireto :
a) ny fanomezam-pahefana amin’ny fanirahana sy ny fifandraisana amin’ny Eveka momba ny olona tarihina,
b) fanampiana ny olona tsy hivadika amin’ny fiantsoan’Andriamanitra,
d) fandraisana adidy amin’ny fampitaovana (fiantohana amin’ny tsy fahasalamana, fisotroan-dronono…)
Hotsipihina amin’io sori-dalàna io ny asan’ny mpiandraikitra ary ny adidy manokana hiantsorohan’izay tafiditra ao amin’ny Prado.
Ny Tompon’andraikitra ambony, araka amin’ny faneken’ny Mpanolo-tsainy, dia hanendry mpikambana iray avy amin’ny Mpanolo-tsaina, na indraindray mpikambana hafa, hisolo tena azy manoloana ny pradoziana ao amin’ny Fikambanana.
X – Fitantanam-bola sy fananana
Hisy vaomiera hisahana ny ara-bola izay ahitana ny Tompon’andraikitra ambony, ny mpitàm-bola jeneraly ary mpanolo-tsaina roa notendren’ny Tompon’andraikitra ambony (jereo Lalànan’ny Fiang. n° 1280).
Ny fikirakiràna vola mihoatra ny 25 isan-jaton’ny fananana manontolo dia mila ny fankatoavan’ny Filan-kevitra ambony.
Raha misy fivarotam-pananana an’ny « Fivondronan’ny Pretra Pradozianina », dia ampiharina ny voalaza ao amin’ny Lalànan’ny Fiangonana n° 1291 – 1296.
Ny Vondrom-paritra dia manam-pahefana ara-dalàna hanana sy hitantana fananana raikitra izay tena ilaina amin’ny fampandehanan-draharaha. Tsy mahazo mandray na mivaro-pananana izy ireo raha tsy mahazo fahazoan-dalàna avy amin’ny Filan-kevitra ambony.
Ny vondrom-paritra dia hanao tatitra ara-bola isan-taona amin’ny Tompon’andraikitra ambony.
Ny Fikambanana no hiahy ny mpikambana ao aminy mba hanana fiainana araka ny tokony ho izy sy ho voatsinjo ara-sôsialy rehefa misy aretina sy fisotroan-dronono.
Hatao filamatra ny fandoavana latsa-kemboka ho an’ny pretra amin’ny firenena isan-tokony.
Ny vondrom-paritra tsirairay no handamina izany ao anatin’ny sori-dalàny.
Raha misy olona karamain’ny Fikambanana dia hampiharina ny lalàna fampiasa amin’ny firenena iasàny.
XI – Ny Firaketana
Ny mpiandraikitra ambony dia manana adidy amin’ny haha-ara-dalàna ny Firaketana.
Ireto avy no tsy maintsy ho voarakitra ao :
a – Ireo izay voaray hanao
– fiofanana voalohany
– fanomezan-toky voafetra
– fanomezan-toky mandrakizay
b – Ny asa lehibe nataon’ny Fivoriam-be sy ny Filan-kevitra
d – Ny taratasy ofisialy momba ny fiainan’ny Prado
e – Ny atontan-taratasy momba ny fananana : fananana manokana, tati-bola, sns…
f – Revio, lahatsoratra na atontan-taratasy manan-danja momba ny tantaran’ny Prado.
Hotehirizina amin’ny firaketan-tsoratra manokana ny taratasy momba ny fidirana amin’ny fiofanana voalohany, ny fanomezan-toky sy ireo niditra amin’ny Fikambanana, ny firotsahana sy fanamasinana ary ny atontan-taratasy mifandraika amin’ny fialàna na fanesorana.
Isan-taona dia halefan’ny mpiandraikitra ny Vondrom-paritra amin’ny Sekretera jeneraly ny lisitr’ireo voaray ka nanao fiofanana voalohany, fanomezan-toky voafetra sy mandrakizay ary koa ireo niala na nesorina tao anatin’ny taona.
Avy amin’izany no handrafetana ny anarana sy izay tsara ho fantatra momba ny fikambanana eran-tany.
XII – Ny Mpisolo toerana sy ny Mpitan-tsoratra ary ny Mpitam-bola jeneraly
Ny mpisolo toerana voalohany no misolo ny Tompon’andraikitra ambony raha ohatra ka tsy afa-manatontosa ny asany izy.
Ao amin’ny Vondrom-paritra dia angatahina hotendrena izay mpikambana iray ao amin’ny Filan-kevitra mba hisolo ny Tompon’andraikitra ambony raha sendra tsy afa-manatanteraka ny asany ity farany.
Aorian’ny naha-voafidy ny Tompon’andraikitra ambony sy ny Mpanolo-tsaina dia hamafisina indray ny fanohizana ny asan’ny sekretera jeneraly sy ny mpitam-bola jeneraly.